BEERTA LOO YAQAAN "WHEELBARROW GARDEN" (HAL-WHEELED, LABA-WHEELED): SIDA LOO DOORTO KAALIYE U AH AQALKA - INFRASTRUCTURE
Noocyada waaweyn iyo qaabka loo dooranayo gawaarida beerta
Beerta wheelbarrow waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah qalabka ugu muhiimsan ee dhaqaalaha, taas oo aan loo isticmaalin oo kaliya beerta iyo beerta, laakiin sidoo kale in fulinta shuqullo dhismo kala duwan. Qaababka cirifka ee suuqyada waa mid aad u weyn, laakiin sida loo doorto kaaliye tayo leh oo awood u leh inuu wax ka qabto shaqada, aynu aragno.
Gaariga ah ujeedada ugu muhiimsan waa qalab lagama maarmaanka ah oo loo adeegsado beerta, beerta, inta lagu jiro dhismaha. Si kastaba ha noqotee, ka hor intaadan iibsan badeecad, waa inaad go'aamisaa hawsha uu qabanayo. Gaadiidka lagu socdo waxay u qaybsan yihiin beerta iyo dhismaha.
Gawaarida beerta - qalab loo isticmaalo in lagu qaado gaadiidka beeraha iyo dhismaha yar yar. Waa lagama maarmaanka ah ee kulanka khudaarta kala duwan iyo miraha, qaraha iyo bocorka, caawisaa marka la shaqeynayo geedo, saarista bacriminta.
Naqshadda qalabka waa mid fudud oo ka kooban:
hal wheel (waxaa jira kala duwanaansho leh dhowr wheel).
Qaabkani waa mid fudud, qaadista karti hooseeya, muraayad jilicsan oo wanaagsan. Maaddaama qaababka naqshadeynta iyo culeyska yar ee baabuurka loo isticmaali karo ragga iyo dumarka labadaba.
Ma taqaanaa? Baabuurtii ugu horraysay waxay ka muuqatay qarnigii 1aad ee BC. er ee Shiinaha. Muuqaalkeeda wuxuu la xiriiraa taliyaha halyeeyga iyo taliyaha dalka Shiinaha. Rootiyada qadiimiga ah ee gawaarida xamuulka ahi waxay xaqiijinayaan sawirada derbiyada xabaashii princely, waxay dhiseen 100 sano oo kale BC. er
Wixii modelka beerta waa muhiim ma aha oo keliya miisaanka culeyska, laakiin sidoo kale mugga. Mugga ugu sarreeya ee mashiinka "master" waa 50-80 litir, halka safarka dhismuhu uu qaadi karo ilaa 140 litir.
Baro sida loo doorto gawaarida beerta.
Hirgelinta dhismaha waxqabadyo kala duwan oo kala duwan iyo gaadiidka alaabta oo isticmaalaya farsamooyinka dhismaha. Waxay leedahay karti aad u fiican, miisaan weyn, fayow, maareyn wanaagsan. Intaa waxaa dheer, waxay leedahay kharash ka badan beerta.
Gaadiidka dhismaha ee dhismaha wuxuu ka kooban yahay qaybaha soo socda:
saldhigga waa meydka la geeyaa shixnaddiisa;
wheels (hal ama in ka badan);
laba xabbadood oo kor ku xusan ee sahlan isticmaalka, balaastig xiran ama xargo;
Gaadiidka dhismaha, waxaa lagu iibin karaa wax kasta oo shixnado ah: cement, blocks blocks, qalab, qoryo, qashin, iwm.
Nooca dhismaha dhoobka ayaa loo isticmaali karaa dalka ama beerta. Xitaa haddii aan la qorsheynin dhismaha, waxaa loo isticmaali karaa in lagu raaco ciid, dhul madow, dhagaxyo, foorno, kuraas, waxyaabaha ku jira daloolka godka, iwm.
In kasta oo xaqiiqda ah in gawaarida beerta ay wax yar ka yar tahay dhismaha dhismaha, waa iyada oo jecel baahida ugu weyn. Markaad dooranayso gaariga waxaad u baahan tahay inaad fiiro gaar ah u yeelato dhawr waxyaalood oo muhiim ah oo kaa caawin doona helitaanka ikhtiyaarka ugu fiican.
Tirada iyo qaabka
Gawaarida xayawaanka waxay ku yimaadaan cabbiro kala duwan - laga bilaabo ugu yar (carruurta), ilaa kuwo waaweyn. Si aad u xulato qalab leh cabbirada ugu fiican, waxaa lagu talinayaa in la tixgeliyo ballaarinta albaabbada, gidaarka oo dhan, albaabbada, waddooyinka aagga, joogitaanka isbedel muuqda, iwm. Kiisaska intooda badan, soo saarayaasha qalabka waxay ku siinayaan gawaarida leh muuqaal jirka ah qaab muuqaal ah, halka qaybta hoose ay ka kooban tahay laba jibbaar, mid ka mid ah dhinacyaduna waa mid si toos ah u jilicsan.
Waa muhiim! Naqshadaan waxaa loo tixgeliyaa inay tahay mid faa'iido leh oo waxtar leh, maadaama ay u sahlayso in si fudud loo dajiyo iyo la raro. Xirfadleyaashu waxay kugula talinayaan inaad doorbidid inaad doorbidid foomkaas.
Sida miisaanka laftiisa laftiisa, waxay ku xiran tahay xajmiga dhismaha, lambarka iyo nooca wheels, iyo waliba waxyaabaha ay ka kooban tahay. Doorashada ugu fiican waxaa loo tixgeliyaa baabuur dhexdhexaad ah oo miisaankeedu yahay 10 kg. Qalabka aadka u culus, waa adag tahay in la maareeyo.
Waxay sidoo kale kaa caawinaysaa inaad baratid sida loo doorto tuubada tuubada ah ee dacha, mashiinka canabka, rusheeyayaasha lagu waraabiyo beerta, nalalka geedaha.
Miisaanka guud wuxuu ku xirnaan doonaa kartida qaadista iyo awoodda baabuurka. Tilmaamaha sare ee culeyska culeyska sareeya, guud ahaan wuxuu noqon doonaa kan sare ee dhismaha. Waxaa haboon in la tixgeliyo marka la dooranayo qalab kiis gaar ah. Haddii shaqo loo qorsheeyay qolka xiran ama meel bannaan, markaa waa lagama maarmaan in la tixgeliyo saamiga albaabbada iyo albaabbada si loo ballaadhiyo dhererka gawaarida.
Qaabka ugu caansan waa karti baaxadiisu tahay 70-130 kg. Heerka sare ee kartida, miisaanka weyn ee badeecada, taas oo macnaheedu yahay in culeyskaagu yahay mid maareynaya.
Waxa ugu muhiimsan waa in la go'aamiyo ka hor intaan iibsan noocyada alaabta loo baahan yahay in la qaado, waxa laga yaabaa inay ka fiicnaato in la siiyo fursadda dhismaha xoog loo kobciyo, halkii ay ku xiran lahaayeen gawaarida beerta yar ee awoodda leh.
Gawaarida beerta waxaa lagu qalabeeyaa tiro kale oo ka mid ah jumlada - laga bilaabo hal ilaa afar.
Moodooyinka hal-wheel waxay leeyihiin faa'iidooyin dhowr ah, kuwaas oo ay ka mid yihiin:
awoodda si sahlan looga gudbi karo geesaha iyo gadaalaha.
Isla mar ahaantaana, baabuur leh hal wheel ma u dhaqmaan si xun xun on jilicsan, qoday ciidda. Sababtoo ah xaqiiqda ah in naqshada ay leedahay hal dhibic oo keliya, taakulku wuxuu bilaabmaa inuu dhulka ku dhajiyo, taas oo adkeyneysa inuu guuro. Intaa waxaa dheer, waddadan oo kale miisaanka culus ayaa dareemay wax badan.
Waa muhiim! Waa in la fahamsan yahay in culeyska culus ee lagu qaado gawaarida xamuulka, in badan oo giraangirro ah waa inay lahaataa.
Moodooyinka mashiinka badan ayaa ka madax banaan kuwa culus, waxay si wanaagsan u dhaqaajiyaan dhulka jilicsan, miisaanka culeyska iyaga ayaa dareemaya wax ka yaryar marka loo eego alaabooyinka leh hal wheel. Hase yeeshee baabuurta laba-ama afar-taarijir ah waa wax aan sahlaneyn, way ku adag tahay inay u gudubaan. Gawaadhida waawayni ma wadaan meel kastaSidaa darteed, marka la isticmaalayo gaariga, waxaa lagama maarmaan ah in la tixgeliyo ballaadhka wadooyinka ee goobta ama beerta, xagasha iyo tirada tirooyinka.
Qaadashada qiimaha waxay ku xirnaan doontaa qiyaasta muraayadaha. Baaxadda ballaadhanka, jilcan iyo ergonomic ka badan tareenka ayaa noqon doona. Diskoolka ugu fiican wuxuu ka socdaa 35 cm ilaa 45 cm.
Gawaarida dalabka gaarka ah ee leh muraayadaha pneumatic, kuwaas oo lagu daboolay hawada cadaadiska. Waxay si siman u dhaqaajiyaan dusha sare, oo leh maareyn sahlan iyo maneuverability.
Waxa kale oo laga yaabaa inay adiga waxtar kuu leedahay si aad u barato sida loo sameeyo wareysigaaga, iyo sida aad u sameysan karto daawada polycarbonate.
Xuddunta waa saldhigga gaariga, kaas oo ka mas'uul ah awooda iyo xasiloonida dhismaha oo idil. Kuwa ugu kalsoon yahey waa alaabooyin ay la socdaan qaab sawir leh oo ka sameysan tuubooyin adag. Wixii beerta ah, qalab yar oo wershed welded sidoo kale waa doorasho wanaagsan.
Xaaladda ugu weyni waxay tahay in naqshadda maskaxeed ay si adag ugu xiran tahay jirkaaga wareegga wareegga, taasina waxay kuu oggolaan doontaa inaad abuurto taageero wanaagsan xagga dambe iyo dhinacyada. Sidoo kale, jirku waa inuu leeyahay taageerooyin tayadoodu sarayso, oo ay ugu mahadcelineyso taas oo si siman oo kalsooni leh u istaagi doonta dhulka.
Faahfaahin dheeri ah ee qaabdhismeedka waa feeraha, taas oo u oggolaanaysa kordhinta xoogga derbiyada iyo hoose ee godka.
Waa muhiim! Markaad la shaqeyneysid shandad ama buluug dareeraha ah, adageyntu waxay noqon kartaa mid adag, sababtoo ah waxay faragelin doontaa. Xaaladaha noocan oo kale ah, waxaa lagu talinayaa in ay doortaan gawaarida leh geesaha wareegsan ee jirka.
Faahfaahinta muhiimka ah ee taraafig kasta waa qalab.
Qalabaynta laba nooc ayaa la bixiyaa:
oo leh laba gacan oo isku mid ah;
oo leh hal xayiraad dheer.
Doorashada koowaad waa mid aad u weyn oo loogu talagalay baabuurta hal-taagta leh, sababtoo ah markaad guureysid waa inaad ku dhowaad miisaanka ku haysaa. Laba hub oo isku mid ah oo ku yaala xaaladaha noocaas ah waxay kuu oggolaanayaan inaad si siman u qaybiso miisaanka oo aad u fududeyso shaqada.
Aad bay muhiim u tahay in qabsashada gacmo-qabadku ay leeyihiin leexasho taasoo ka hor-tagi doonta khalkhalka baqshadda qofka.
Noocyada muraayada badani uma baahna inay miisaanka saaraan, waa in hore loo riixo. Qalabka noocan oo kale ah waxay ku haboon yihiin hal gacan dheer.
Iyadoo aan loo eegin wax ka bedelida, waaxyaha ku yaala gawaarida waa inay ahaadaan kuwo raaxo leh, dheer, oo leh qalab la jajabiyey ama caag ah. Haddii labada-ta mid ah, baabuurka afar-taagta leh ayaa lagu rakibay laba gacmood oo isku mid ah, markaa masaafada u dhaxaysa waa inay ahaataa mid ku habboon jirka qofka.
Ma taqaanaa? Farqiga aasaasiga ah ee u dhexeeya gawaarida Shiinaha iyo kuwa yurubiyanku waa in gawaarida waaweyn ee Shiinaha ay ku jiraan bartamaha guud ahaan. Tani waxay u ogolaatay hal shaqaale Shiine ah inuu qaado seddex, ama xitaa lix jeer oo ka badan xamuul ka badan baabuur Yurub ah ayaa qaadi kara hal giraan yar yar oo hore. Kadib, wax waliba waa ku saabsan qaybinta saxda ah ee shixnadda.
Waa lagama maarmaan in la daaweeyo xulashada maaddada oo ka mid ah jidhka baabuurka la sameeyo mas'uuliyad buuxda, tan iyo inta badan waxa ay ka timaadaa saameynta taban ee jawiga, dhacdooyinka atmospheric.
Taasi waxay sabab u tahay soo-gaadhista noocan ah, miraha, waxyeellada, wax soo saarka alaabada aan la isticmaali karin. Tani waa laga fogaan karaa iyada oo la dooranayo kartoon la isku haleyn karo oo ka timaada alaab tayo leh iyo adeeg nolol dheer.
Qalabka galvanized ama budooyinka la isku qurxiyo ayaa loo tixgeliyaa xalka ugu fiican. Faa'iidada nooca ugu horeeya waa muuqaalka quruxda leh ee quruxda leh, ilaalinta korantada oo sareeya, ka hortagga miraynta. Xirmida budada ah, inkastoo aan soo jiidasho yareyn, waxay leedahay difaac sare oo la xidhiidha arrimaha dibedda, waxaa lagu gartaa xoog xoog leh, xirashada iska caabinta iyo iska caabinta maskaxda.
Waxaa sidoo kale jira baabuur laga sameeyey caag. Waxay yihiin kuwo khafiif ah, macquul ah, qoyaan u adkaysta, laakiin waxay u baahan yihiin qaar ka mid ah daryeelka oo aysan ku habooneyn gaadiidka weyn ee culus. Waxyaabaha geedaha waa kuwo adag, bey'ad isboorti leh, laakiin waxay ka cabsanayaan qoyaanka, waxay u adkahay xaaladaha cimilada, waxay u baahan yihiin dayactir taxaddar leh.
Dhawaan, carafyadan waxaa loo isticmaalay si gaar ah sida qurxinta, waayo kaydinta dheriyada ubaxyada ama abuurista qaybaha naqshadaynta muuqaalka.
Dabcan, kharashka baabuurka beerta wuxuu si toos ah ugu xiran yahay dhammaan arrimaha kor ku xusan. Noocyada ugu khafiifsan ee kumbiyuutarrada ayaa ah kuwa ugu yar, laakiin sidoo kale waxa loo arkaa inay yihiin kuwa ugu waxtarka badan sababtoo ah waxay leeyihiin awood xadidan.
Waxaa fiican inaad bixiso dheeriga ah oo aad dooratid alaabta badan ee saqafka ah ee cabbirka dhexdhexaadka ah ee adag ee birta, birta aan lahayn. Celcelis ahaan, qiimaha sicirka ee qalabyada oo dhan sifooyinka kala duwan 30 illaa 70 doolar.
Go'aanka is-goosta ah: sida loo sameeyo dhejiye si loo siiyo foosto hore
Haddii raadinta beerta gawaarida tayo sare leh ee dukaamada aysan ku guulaysan, waxaad awoodi kartaa, qalab fudud iyo qalab yar oo yar, samee badeecadaada.
Waxaad xiiseyneysaa inaad baratid sida loo sameeyo gacmahaaga xagaaga, dhismaha indhoolaha ah ee guriga, wadooyinka la taaban karo, dhirta lagu qurxiyo, barxadda beerta, isha, dhagxaanta dhagaxa ah, sariirta ubaxa, dhagax qallalan, baradho baradhada.
Si loo soo saaro baabuurta guriga lagu sameeyo ee beerta waa in loo diyaariyaa qalabka soo socda:
caag ah ama foosto bir ah oo ah 120 l;
laba wheels, tusaale ahaan, laga bilaabo mooto hore, baaskiil;
tuubooyinka (profiles) loogu talagalay alxanka sawirka;
50 malyan oo loogu talagalay wax soo saarista iskudhafyada.
Si aad u siisid muuqaalka muuqaalka ah ee daawada, waxaad isticmaali kartaa dheecaan, rinjiyaal qoyan oo diidmo ah ama walxo gaar ah.
Sida loo sameeyo farshaxan ka sameysan foosto hore: video
Algorithm ee samaynta gawaarida beerta ee gacmeedku waa mid fudud, waxayna ka kooban tahay ficilada soo socda:
Iska yaree foosto caag ah qeybtii. Haddii foorno bir ah loo isticmaalo, markaa waxaad u baahan doontaa inaad sii wado wakhti yar.
Ku rakib shax qaab ah leyliyo adoo ka soo qaadaya 25 x 25 mm profiles.
Iska yaree jadwalka 50 mm ku wareegsan wareegga wareegga cagaha, kaas oo ciddida lagu dul dhejin doono.
Ku rakib tuubooyinka hoose ee labada dhinac ee dhismaha, adigoo isticmaalaya nuts caadi ah oo lagu xiro.
Ku xir wiishka gadaashiisa shaashadda.
Weli "haystaha" saaraha, adoo isticmaalaya, tusaale ahaan, xabo ka soo gasho "gazelevskaya".
Marxaladda ugu dambeysa waa qaabeynta nalka. Si arrintan loo sameeyo, waxaad isticmaali kartaa dhowr bushaji oo ka samaysan nuugaha shoogga, oo ku yaal hal saf, ama isticmaal cajalad koronto, cellophane, iwm. Waxa ugu muhimsan ee habka shaqada waa in si taxadar leh loo dhajiyo dhammaan walxaha, dareen gaar ah u leh dhibcaha isku xirka. Si aad u ilaaliso alaabta ka soo gaarto saameynta waxyeellada leh ee dhacdooyinka atmospheric, waxaa lagu dabooli karaa caanaha, wakiilka ilaalinta gaarka ah, rinji primer, iwm.
Gaariga beerta - waa caawiye weyn oo reerka ah, kaas oo fududaynaya isla markaana dardar galin doona shaqada beerta iyo dhismaha.
Intaa waxaa dheer, iyada oo la adeegsanayo qalab kala duwan oo gacanta ah oo wakhti yar la qaato, waxaad si madax-bannaan u dhisi kartaa baabuur tayo leh, taas oo ku kici doona dammaan wuxuuna socon karaa sanado badan, iyada oo la ilaalinayo tayada waxqabadka.
Waxaan isticmaalaa 2 sano Vinco 311zp. Guud ahaan, ku qanacsan, ayaa ka badbaaday dhismaha. Xaqiiqdu waxay tahay in 2 sano oo ka mid ah howlgalada keli ah ee dhismaha, muraayadda ayaa wali ku dhuftey - taayirada dillaacday iyo xakamaynta ayaa qalloocan.
Laba-taagood oo fiican (laakiin waxay ku xiran tahay goobta - haddii dariiqyada cidhiidhiga ah, manhajka halbogal ah, laakiin culayskoodu uu yaryahay) Dhamaan caaggu wuxuu ka fiican yahay - jilicsan iyo iftiin. Ma fuulaysid ciddiyaha. In kastoo, haddii dhismaha la sii wado, ka dibna waxaa suurtagal ah in la eego muuqaal u dhow caaga caagga ah. Oo fiiri birta, oo laga yaabo in jirka la sameeyo. Mararka qaarkood waxaan la kulaa gawaarida dukaamada, sida haddii ay qaadaan hawada iyaga ka sarreeya - waxay yihiin bir adag oo dhuuban. Halkan waa baabuurkayaga, Kiev. iyadu horay u jirtay toban sano - marnaba bamgareynta muraayadaha, kaliya dufanka ku rid laba jeer - iyo dayactirka oo dhan.
Waxaan haystaa hal-wheel, waxaan u isticmaalaa iyo deriska oo dhan agagaarka, sababtoo ah waxay leeyihiin labo-wheeled oo tagaan on sirqo ay u gaar ah ma shaqeeyaan. Waxaan ahay hal-wheeled. Way ka fiicantahay in ka hoos mari karto inaanad baabuur wadin.